Arsenal Oo Usoo Baxday Wareegga Xiga Ee Europa League-ga Iyadoo Laga Adkaaday Lugta 2aad – Garsoore Sports
Arsenal Oo Usoo…
Kooxda kubbada-cagta ee Arsenal ayaa ka badbaaday lugtii labaad ee wareegga 16ka in ay u gudbi weydo wareegga xiga kaddib markii 1-0 ay uga adkaatay kooxda heysata horyaalka Greegga ee Olympiakos ciyaar ka dhacday Emirates Stadium.
Arsenal ayaa u talaabsatay wareegga xiga kaddib markii ay wadar ahaan labada lug ku badisay 3-2, laakiin macalin Mikel Arteta, waxay u aheyd fiidnimo ka cabsi badan sidii la qorsheeynayay, iyo guud ahaan qaab ciyaareed liita oo ka yimid kooxdiisa.
Kooxda Mikel Arteta ayaa gacanta ku haysay cayaarta iyagoo aanan wax qatar ah foodsaarin kooxda martida u ahayd, Pierre-Emerick Aubameyang iyo Nicolas Pepe ayaa labadoodaba helay fursado goolal loo fishay, laakiin Gunners ayaa u muuqatay mid caajis badan.
Olympiacos ayaa heshay fursada ay ciyaarta dib ugu soo celin karto, Youssef El-Arabi, oo gool dhaliyay lugtii hore, ayaa mar kale soo taabtay shabaqa Gunners markii uu hoggaanka u dhiibay kooxda martida aheyd.
Maadaama natiijadda ciyaarta loo eegayo sidii ay kusoo dhammaatay lugtii hore, Olympiakos ayaa laba gool ka hooseeysay lugtii hore, waana Arsenal kooxda usoo gudubtay wareegga quarter-finalka Europa League markii saddexaad 4 xilli-cayaareed oo isku xiga.